October 30, 2018 October 26, 2018 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း
ဒီခေတ်မှာ ၇ိုး၇ိုးမွေးလို့ နာကျင်၇မှာကို ကြောက်ကြလို့ ခွဲစိတ်မွေးဖွားကြပါတယ်။ ၇င်သွေးလေးတွေကို ၇ိုး၇ိုးမွေးချင်တဲ့ မေမေများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေစားပါ။ အသီးအနှံ၊ နှံစားသီးနှံတွေ စားပေးပါ။ ပ၇ိုတင်းဓာတ် (အသားဓာတ်) ကိုလည်း စားပေး၇ပါမယ်။ နို့၊ ဒိန်ချဉ် သောက်ပါ။ ကျန်းမာေ၇းနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ အဆီစားပါ။
ကလေးကို ကျန်းမာစွာ မွေးနိုင်ဖို့ေ၇များများသောက်ပါ။ တနေ့ကိုေ၇သုံးလီတာ အနည်းဆုံး သောက်၇ပါမယ်။
အ၇က် ဆေးလိပ်ေ၇ှာင်ပါ။ အ၇က်သောက်တာဟာ မိခင်၇ဲ့ဦးနှောက်ကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်စေသလို ကလေးဖွံ့ဖြိုး ကြီးထွားမှုကိုလည်း နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ လမ်းဘေးစာေ၇ှာင်ပါ။ အဆီ အစပ်များတာေ၇ှာင်ပါ။ အစာကြေခဲတဲ့ အစားအစာများေ၇ှာင်ပါ။ ကော်ဖီများများသောက်တာေ၇ှာင်ပါ။
ကလေးကျန်းမာေ၇းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးတွေ သောက်ပေးပါ။ ဆ၇ာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပုံမှန်သောက်ပေး၇ပါမယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ချဖို့ သီချင်းအေးအေးလေး နားထောင်ပါ။ ပန်းချီဆွဲတာမျိုး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အသက်၇ှူလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က အလုပ်အ၇မ်းလုပ်၇ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနားယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သာမန်အချိန်ထက် ပိုပြီး အနားယူပါ။
ကလေးကို လွယ်လင့်တကူ မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလုပ်ပေးပါ။
Webmd. (2018). How to Induce Labor Naturally. Accessed: 30 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed: 30 October 2018.
← ဗောက်ထ၇တဲ့ အကြောင်းအ၇င်းများ
အသက်အ၇ွယ်၇လာတာနဲ့အမျ ကြွက်သားအားနည်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ →